Nhau - C-nyeredzi 2020 & Huayuemei Mwenje
C-nyeredzi - Shanghai Yenyika Dzepasi Pose Kuratidzira Kwemhinduro uye Maitiro Zvese nezve Retail, nhengo yeEuroShop Trade fairs mhuri, yakakura nekukurumidza kubva kutanga kwayo muna 2015 uye yakave yakakurisa chikuva muindasitiri yekutengesa muChina.
C-nyeredzi 2020 yakabudirira kuitiswa munaGunyana 2-4th, 2020 kuShanghai New International Expo Center. Mumazuva matatu akabudirira, C-nyeredzi yakagamuchira 134 varatidziri uye 9,006 vashanyi vehunyanzvi.
Chinese indasitiri yekutengesa yapfuura neshanduko hombe nekuda kwe COVID-19 mumwedzi mishoma. China yakawana budiriro huru mukurwisa iyo COVID-19. Ndiyo nguva chaiyo yekuti isu tifunge maitiro ekugadzirira rinotevera boomHuayuemei Mwenje wakatsunga kupinda muchiratidziro ichi. Vashandi vekuratidzira vakagadzirirawo denda nzira dzekudzivirira mune kuratidzira.
Wese munhu anoda kupfeka chifukidzo uye chengetedza kushamwaridzana kure. Tine zuva rimwe rekuvaka dumba redu. C-nyeredzi 2020 yakabudirira kuitiswa munaGunyana 2-4th, 2020 kuShanghai New International Expo Center. Kune vanhu vazhinji vanoshanyira kuratidzwa.
Dumba redu rinokwezva vanhu vazhinji kuti vashanyire, nekuti yedu RGB Dynamic Curtain LED yakaratidzwa mudumba.
Mugadziri wedu anoshandisa ruvara kujekesa dingindira rechiratidziro ichi, Chiri kubata meso.
Yedu yese backlight Curtain LED Strip inogona kudzikiswa, zvakare inogona kuve yakasarudzika tembiricha tembere maererano nechikumbiro chako.
Iyo RGB Dynamic Curtain LED Strip ichiri inonyanya kupenya pamatumba, inokwezva vanhu vazhinji kuti vashanyire iyo. Inotora DMX512 protocol, uye shandisa K-8000C kutonga kuti igadziriswe.
Iwe unogona kugadzira izvo zvipenyu zvaunoda, iyo iwe yaunogona kushandisa yedu Dynamic Curtain LED Strip kuti igadziriswe. Ndiko kuchave kuita yako dumba ive huru imwe!
Isu takatora chikamu muC-nyeredzi ndeye epochal kukosha apo hupfumi hwakatambura!
Icho chinhu chakakosha kwazvo kwatiri, ngatizivisei rumwe ruzivo nezve LED Mwenje, isu tichaedza nepatinogona napo kusimudzira chigadzirwa chedu chigadzirwa uye nekugadzira zvimwe zvitsva zvigadzirwa.
Ngatiisei izvi kumberi uye usarasikirwa nemukana wako muna 2021.